सेयरमा लगानी गर्ने चाहनेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
सेयर बजारमा सचेत र विवेक पुर्‍याएर लगानी गरे छोटो समयमै मनग्य कमाइ गर्न सकिन्छ । तर बुझ्दै नबुझी हामफाले डुब्न पनि बेर लाग्दैन।
फाल्गुन ६, २०७३-पैसा छ, तर कहाँ लगानी गर्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? वा, दु:ख गरी कमाएको/बचत गरेको पैसा कम ब्याज आउने गरी बैंकमा राख्नुभएको छ ? के त्यसलाई सुरक्षित तवरले लगानी गरी राम्रो प्रतिफल कमाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने, सेयरमा लगानी पनि एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । सेयर बजार त्यस्तो क्षेत्र हो, जसमा सचेत र विवेक पुर्‍याएर लगानी गरे छोटो समयमै मनग्य कमाइ गर्न सकिन्छ । तर सचेत भने हुनैपर्छ किनभने सधैं कमाउने ग्यारेन्टी पटक्कै हुँदैन ।
स्थायी जागिरजस्तै चिया ›
फूल बेचेर अर्बपति मंसिर ९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमैमंसिर ९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वी पहाडको ढोका खुल्योमंसिर ९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
धमाधम ६ लेनका सडकमंसिर ९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
प्राधिकरणको बजेट ४३ अर्बमंसिर ९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
दूधकोसी पुल सञ्चालनपछि जोडिए पूर्वी पहाडमंसिर ८, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
चमेलियाका लागि प्रसारण लाइन तयारमंसिर ८, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
हरिसिद्धिका सञ्चालक जग्गा बिक्री गर्ने दाउमामंसिर ८, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
घट्न थाल्यो तरकारीको भाउमंसिर ८, २०७४पूरा पढ्नुहोस्